Ụlọ ọrụ anyị - Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.
Home > Banyere Shimge > Ụlọ ọrụ anyị
Oguzosi ike na 1984 ma bụrụ isi n'etiti ụlọ ọrụ mmiri ọkụ mmiri nke China • Obodo Daxi, obodo Wenling nke Zhejiang Province, SHIMGE Pump Industry Group Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ nkwonkwo depụtara na-emepụta ụdị nfuli na nchịkwa dị iche iche. N'ime iri afọ atọ gara aga, SHIMGE Pump Industry Group abanyela nyocha nyocha, ịzụ ahịa na ịzụ ahịa ụdị nfuli na ihe nchịkwa dị iche iche, yana ịnye nfuli nhazi nke mbụ na usoro ọgwụgwọ usoro mmiri maka ụwa.
N'ịkwado 'mmepụta mkpụrụ ego', mmepụta ihe zuru oke na gburugburu ebe obibi site na mmalite ya, ụlọ ọrụ ahụ agafewo ISO9001, Ọrụ na OHSAS18001, na-akwado njikwa arụmọrụ dị mma na GB / T 19580, ma guzobe usoro mkpuchi dị mma. Ozokwa, o guzobere ụlọ ọrụ na-eduga ụlọ ọrụ na-ahụ maka nlekọta anụ ahụ na kemịkal, na inyefe ọrụ nyocha nyocha ọkwa B (ọkwa nke 1) na nyocha a na-arụ site na nkwupụta ikike. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ya agafewo akwụkwọ GS, CE na UL, ha ga-agbaso ụkpụrụ RoHS.
Ruo ihe karịrị afọ 30, SHIMGE nọ na-agbalịsi ike inye ntinye kacha mma na usoro ọgwụgwọ usoro mmiri maka ụwa, iji mepụta ndụ dị elu maka ihe a kpọrọ mmadụ. Ọ na-agbaso ụkpụrụ dị mkpa nke "& Nbsp; Ụkpụrụ, Ọganihu, mkpanaka aja Win-win & quot ;, iji nye ọrụ ndị dị oké ọnụ ahịa na-azụ ndị ahịa, na-eduga n'ọganihu ụlọ ọrụ, na-ebute ọgbọ dị ebube nke ụlọ ọrụ nkwụnye ọkụ China!
Ịchekwa ikike, ezigbo ntụkwasị obi
Mee ka ndị ahịa a na-akwanyere ùgwù ùgwù
na Mmiri Ngwọta Nleta Ọrụ Ntanetị
Nye nfuli kacha mma na usoro ọgwụgwọ usoro mmiri maka ụwa ma mee ka ndụ mmadụ dị elu.
Inwe Nnozi Ogologo na Mgbapu Mmeri
Na-arụ ọrụ nhazi dị elu iji nye ngwaahịa na ọrụ bara uru
Ngwongwo na-achịkwa ihe, njikwa, igwe, generator, ihe nkedo ikuku na akụrụngwa ngwaahịa, ahịa.
Mmiri mmiri, ngwa mmiri zuru ezu, ndị nchịkọta ikuku; akụkụ na akụkụ nke ngwaahịa ndị ahụ e kwuru n'elu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 usoro, ihe karịrị 2000 nkọwa na ụdị na-egbo mkpa nke ubi na ugbo, irighiri mmiri mmiri, ikuku oxygenation dị elu, ọrụ nchịkwa nke mmiri na-emepụta mmiri, ụlọ mmiri, mmiri ntancha / mmiri dị ọcha, HVAC, nhazi, mineral, refrigeration, mmiri mmepụta ihe, ihe ịchọ mma, ngwá ọrụ. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ ndị a na-ahazi na ndị a haziri ahazi dabere na ngwaahịa ndị dị n'elu, biko rụtụ aka na ngwaahịa na ọrụ ọrụ nke weebụsaịtị a.